Abaholi bendabuko bavala ezikole zokusoka ezingekho emthethweni e-NMB | Scrolla Izindaba
Abaholi bendabuko bavala ezikole zokusoka ezingekho emthethweni e-NMB
Kuboshwe izingcibi ezintathu e-Nelson Mandela Bay, abebezosoka abahlanu basindiswe ezikoleni zokusoka ezingekho emthethweni ngesikhathi abaholi bendabuko bevala ezikoleni zokusoka ezingekho emthethweni.
Ukusoka kuzohlala kumisiwe kulo masipala ngenxa yokwanda kokuthelelana kwesifo se-Covid-19.
Abaholi bendabuko bebelokhu bephikisana nalesi sinqumo, bethi kusalele emuva abafana ababalelwa kwabayi-7 000 abafuna ukusokwa ngemuva kokumiswa kwesikathi yokusoka ebusika.
Kepha manje basho ndendlela ehlukile.
UChief Velile Mfunda ongusihlalo wabaholi bendabuko base-Cacadu uthe bebevala izikole zokusoka ezephula imithetho ye-Covid.
“Emasontweni amabili edlule sibophe izingcibi ezintathu ngokuqhuba izikole zokusoka ngokungemthetho. Ezimbili zazo ziboshwe e-Uitenhage. Oyedwa futhi ungusihlalo wokusoka e-Uitenhage.
“Siphinde sabopha ingcibi esikoleni sokusoka esise-KwaMagxaki e-Port Elizabeth ngokusokisa ngokungemthetho basokwayo abathathu. Siphinde samthola ephethe amafomu okusoka amadala athwetshulwe ngamasiginesha omama balaba abasokwayo.”
“Lokhu akwamukelekile ngoba sesiyalele yonke imitholampilo ukuthi ingawakhiphi amafomu okusoka njengoba kusalokhu kumisiwe ukusoka kulo masipala.”
Wengeze wathi: “Lezi izingcibi ezifanelekayo futhi ziyawazi umthetho. Babekwe amacala okwephula umthetho we-Disaster Management Act. Abasokwayo babuyiselwa emakhaya abo babekwa ngaphansi kweso labazali babo.”
UMfunda uthe basazoqhubeka nokuvala lezi zikole ezingekho emthethweni.
“Sizoqhubeka nokuvala izikole zokusoka ezingekho emthethweni ngosizo lwamaphoyisa nezikhulu zezempilo. Sifuna futhi ukuxwayisa abazali ukuthi bazobekwa necala ngokuvumela izingane zabo ukuthi zisokwe ngokungemthetho.
“Phambilini besiphikisana nokumiswa kodwa i-Covid ayilona ihlaya. Kungcono ukuba nokusalela emuva kwabafana abangasokile kunokuthola inani elikhulu lokufa kwabasokwayo bebulawe yi-Covid-19,” uyasho.